Dr.Paawul T. Williyam Bakister/Paul Baxter Bara 1954 Keessa Aadaa fi Seenaa Oromoo Barachuu fi Barreessuu Jalqbe
Bitootessa 18, 2014
Dr.Paawul Bakisiter 1925-2014.Doktorii kun bara 1954 jalqabee aadaa fi Gadaa Oromoo barachuu jalqabee Bitootessa 28,2014tti ganna 89-tti UK-tti lubbuu dhabe
‘Hariyaa fi jaalii Oromoo guddaan’ seenaa, aadaa fi Gadaa Oromoo kitaabaa fi waan akka akka irratti barreess jalqabe kun bara Waraan Addunyaa Lammeessoo keessa Itoophiyaa dhufee.
Dr.Paawul,P.T.W bara 1925 Ingiliizitti dhalatee biyyuma sunitti yuniversitii beekamtuu Kambiriijitti baranoota antiroopoloojii baratee,yuniversitii Oksfoorditti doktora tahee UK keessaa yuniversitii gara garaa barsiisa.
Barnootuma suniin aadaafi gadaa Oromoo barachuuf Keenyaa fi Itoophiyaa dhufe.Akka doktora Gammachu Magarsaa barsiisaan seenaa fi aadaa Oromoo Dr.Gammachuu Magarsa jedhutti Dr.Paul nama duraa dansooma Oromoo,aada fi Gadaa isaa addunyaa barsiise ka duraati,hariyaa Oromoo jabaa.
Dr.Paawul warra Waldaa Qorannoo Oromoo,OSA yayyabe keessallee tokko jehdan.Bara 1954 aadaa fi seenaa Oromoo barachuuf Keenyaa dhufee aadaa Gadaa Booranaa baratee, Gujiitti dabree, Arsii kofalee fi Walloollee gahee jireenna Oromoo barreesse.
Dr.P.T.W Gurrnadhalaa 28, 2014, Manchesteritti ganna 89tti lubbuu dhabe,jaare.Abbaan ilmaatii nama akaakuullee arge.Jaartiin isaa nama ganna 87ti,Machesteri jiraatti. Dr.Pawul,Bitootessa 18,2014 awwaalan.
Mee waan namii Dr.Paawul waliin hojjate ka akka Dr.Gammachuu Magarsaa faan jedhan caqasaa Kitaabaabaa fi barreeffama akka akkaa Dr.Paawul barreesse fi gulaale jedhan keessaa haga tokkollee laalaa.